About Us - Anke fonosana Company Limited
Niorina tamin'ny taona 2009, ANKE Packing Co; Ltd no orinasa mpitarika amin'ny indostria famonosana Eliquid & CBD. Manarona faritra 22000 metatra toradroa, miaraka amin'ny atrikasa famokarana maoderina, atrikasa fitehirizana manan-tsaina,
Ivotoerana R&D, ivon-toeram-piasana ary fotodrafitrasa hafa. Manana tsipika plastika 15 izahay izao, tavoahangy vera 6 ary boaty fanontana taratasy. Ny ambaratonga famokarana isan-taona dia mihoatra ny 230 mln pcs ao anatin'izany
plastic , tavoara ambony vilany, siny CBD, tavoahangy pipeta fitaratra, fitoer-vera sns.
Tamin'ny alàlan'ny ezaka rehetra nataon'ny ekipanay dia niorina tao Lille ny biraon'ny ANKE France. Tsara kokoa izao ny manome ho an'ny mpanjifa eropeana!
ANKE tongasoa ny fifandraisanao!
Ny vaovao sy ny zavatra takiana dia mahazo avy amin'ny mpanjifa, ny Sampan-draharahan'ny Sales, Research Sampan-draharahan'ny, Production Sampan-draharahan'ny, Quality Control Sampan-draharahan'ny, fonosana & Fandefasana Entana sy ny Sampan-draharahan'ny varotra Rehefa miara-miasa mba hanome tavoahangy tonga lafatra.
Sales amin'ny departemantan'i-Hamarino entana haingana sy marina. Ny ekipa varotra dia matihanina amin'ny vokatra sy ny fifandraisana. Ho isika manana fifandraisana tena fahafinaretana ka hanamarina tsipiriany mora foana.
Sampan-draharahan'ny Production --- Product marina vokatra ilainao. Rehetra ny mpiasa za-draharaha sy fampiofanana isam-bolana. Ny milina dia teny sy ny fikolokoloana tsy tapaka. Izany fomba, toetra avo tavoahangy vokatra azo.
Quality Control Sampan-draharahan'ny --- Ataovy azo antoka tsirairay ny vokatra tonga lafatra. Karazana tavoahangy tsirairay dia manana toetra manokana fanaraha-maso ny rafitra. Vokatra tsirairay azo hitsapana farafahakeliny in-3 alohan'ny nandefa. Ary samy siny hoditra ho marina sy tonga lafatra.
Sampan-draharahan'ny Fandefasana Entana fonosana & --- miantoka ianao tavoahangy hahazo tsara ara-potoana. Feno hipoka vokatra ho any amin'ny aizim-baoritra mba hiarovana. Ihany koa izahay sambo mandamina mialoha mba ho azo antoka, indray mandeha vokatra vonona, dia afaka mandefa azy.
Niara-niasa tamin'ny ANKE fonosana, ianao mahazo vokatra tsara ary koa ny asa fanompoana matihanina. Omeo anay roa vintana, ianao azo antoka handray ny mpiara-miasa.